Mavericks any am-piasana: iza no manakarama? | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 18, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tamin'ny volana lasa teo dia nisafidy ny Mavericks at Work ho boky hamakiana azy ny Mavericks at the Indianapolis Marketing Book Club. Tiako ny boky, ary tiako indrindra ny boky fandraharahana. Feno azy ireo ny tranoko. Mamaky ity iray ity aho ary manomboka Aza mihinana irery mihitsy: ary tsiambaratelo hafa hahombiazana, fifandraisana iray isaky ny mandeha.
Mavericks at Work dia iray amin'ireo boky manaitaitra aingam-panahy, saingy tsy azoko antoka na mahazo 'mameno' azy ireo aho na tsia. Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin, ary na dia ny namako sy ny fianakaviako aza dia milaza amiko foana hoe Maverick aho.
Maverick aho ato am-poko, saingy tsy azoko antoka fa mila maverick be dia be izao tontolo izao. Izahay ve?
Maverick: mpanohitra tokana, amin'ny maha-manam-pahaizana, mpanakanto, na mpanao politika azy, izay mijoro amin'ny toerana tsy miankina amin'ireo mpiara-miasa aminy.
Inona moa fa tsy mila bandy manamboatra fiara fotsiny isika, mamafa ny gorodona, mitazona ny bus ary mijery ny fivarotana? Tena afaka mampiroborobo ny Mavericks ve ny orinasa rehetra? Tsy hoe manana fisalasalana momba ny toe-tsain'ny mpandraharaha misy ahy aho, manana fisalasalana fotsiny aho fa be dia be ny fotoana mety ho an'ny Mavericks any.
Nisy namako akaiky nanontany ny fomba tiako ny boky. Namaly aho hoe: “Tiako ilay boky!”
Avy eo dia tsy maintsy niverina niasa aho. Tsy hoe tsy mamela ahy hanana fitaomana ny asako… fa izay fotsiny orinasa iray manontolo tsy voatery hankasitraka ilay maverick any am-piasana. Izy ireo no tsy mpifanaraka, ny any ivelany, ny mpanakorontana. Matetika aho dia mieritreritra fa ilay Maverick no miafara amin'ny fikatsahana ny fotoana manaraka - satria tsy teo amin'izay toerana nialan'izy ireo fotsiny.
Diso ve aho amin'izany?
Dec 18, 2006 ao amin'ny 2: PM PM
Mieritreritra aho fa afaka mijoro amin'ny fahaleovan-tena ny olona amin'izay ataony .. na ny mpikarakara fivarotana na mekanika fiara. Heveriko fa tsy afaka manana olona be loatra isika izay mitsahatra tsy manao zavatra fotsiny satria “toy izany ny toetrany” fa kosa mametraka fanontaniana, manapa-kevitra ny hanohitra ny voamadinika, ary vokatr'izany dia manatsara ny tontolo manodidina antsika.
26 Jan 2007 amin'ny 10:14 PM
Manaiky aho, izany no antony ananantsika an'i Jessie James izay manamboatra moto, Orange County Choppers, manamboatra moto. Ary ny olona rehetra izay hanao asa fifanarahana ho azy ireo. Mihevitra ve ianao fa mpifanaraka daholo ireo olona ireo, milalao soa aman-tsara amin'ny fiainana. ohatra ireo. Tsy mpifanaraka aho. Izaho dia amerikanina vehivavy fotsy izay nandeha nianatra tany amin'ny sekoly acupuncture. naharitra 3 taona. ary tsy mendrika amin'ny asiana aho. Holazaiko fa tsy mpanara-dalàna. Tena mila mpifaninana hafa isika
Dec 18, 2006 ao amin'ny 8: PM PM
Tsy miombon-kevitra aho ary tsy mandray ahy amin'ny làlana tsy mety, ary tsy voatery ho sarobidy kokoa noho ny iray hafa. Mino aho fa mila ekipa manainga sy mpanosika 'ny ekipa lehibe. Ireo izay mieritreritra azy sy ireo izay afaka manatanteraka an'io drafitra io.
Manontany tena fotsiny aho hoe ohatrinona ny mavericka mazàna tantanan'ny indostria iray ary raha misy ny tsy fahampiana tokoa eo amin'izy ireo!
Dec 18, 2006 ao amin'ny 10: PM PM
Nieritreritra an'io koa aho, saingy tsapako - ny tsirairay dia mety ho Maverick indraindray, ary ho "lifter and pusher 'amin'ny fotoana hafa (na dia mila manaikitra ny lelany aza). Tsy tsara izany raha toa ny olona rehetra manolo-kevitra ny hanao fomba vaovao isaky ny mandeha ny zava-drehetra. Saingy heveriko fa misy toerana tokony hametrahan'ny tsirairay ny fanontaniana mila apetraka, indrindra ny “fa maninona?”. Ary amin'ny zavatra niainako, dia tsy dia nanontaniana loatra ity fanontaniana ity.
Dec 21, 2006 amin'ny 10: 47 AM
Manaiky aho. Tsy maintsy manana olona isika hanosika ireo hevi-baovao sy nofinofy momba izay mety hisy. Toy ny zava-dehibe ihany koa dia ilaintsika ny olona afaka mifantoka amin'ny fanaovana izay ilaina mba hitondrana ny làlana vaovao mankany aloha.
Misy fotoana sy toerana ho an'izy roa. Mitranga ny fijanonana rehefa tsy misy hevitra vaovao atolotra. Na izany aza, ny fijanonana koa dia mety hitranga rehefa maro ny hevitra atsipy ao anaty fifangaroana ary tsy misy olona te hiasa amin'ny hevitry ny hafa.